तयार, आगो, Aim | Martech Zone
तयार, आगो, Aim
सोमबार, अक्टोबर 25, 2010 बुधबार, अक्टोबर 29, 2014 Douglas Karr
यो साँझ केहि धेरै प्रसिद्ध प्रख्यात बिक्री, मार्केटिंग र ब्रान्डिंग विशेषज्ञहरु संग बिताएको एक महान रात थियो। हामी एक निजी कोठा मा एक धेरै राम्रो रेस्टुरेन्ट मा आमन्त्रित गरियो। बैठकको उद्देश्य एक सहकर्मीलाई मद्दत गर्नु थियो जसले आफ्नो व्यवसायलाई अर्को तहमा लैजान चाहान्थे… वा केहि स्तरहरू जहाँ अहिले छ।
कोठामा एक टन सम्झौता भएको थियो ... यो के हो भनेर बुझ्नुहोस् कि तपाइँ एक वाक्यमा के गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई फरक पार्ने लक्षणहरू पहिचान गर्नुहोस्, तपाइँको सेवाहरू बेच्नको लागि प्रक्रिया विकास गर्नुहोस् तपाइँले ल्याउनुभएको मानको आधारमा तपाइँको सेवाहरू बेच्नको लागि, पहिचान गर्नको लागि तपाइँको नेटवर्कसँग जडान गर्नुहोस्। शीर्ष सम्भावनाहरू बजार गर्न र एक ब्रान्डको विकास गर्न जुन तपाईं तालिकामा ल्याउने कुरालाई समेट्छ।
म यससँग असहमत भएँ ... तर यो केहि गहन काम हो, होइन र? तपाईं यी चीजहरूमा वर्षौंसम्म काम गर्न सक्नुहुनेछ ... र ड्राई board बोर्डमा फिर्ता सक्नुहुनेछ किनकि तपाईं सफल हुनुहुन्न।
मेरा सहकर्मीहरूलाई सबै उचित सम्मानका साथ, जब म विशेषज्ञहरू यस प्रकारको रणनीतिक योजना र सल्लाह प्रदान गर्दछन् म सधैं अलि संशयवादी हुन्छु। म ईमानदारीसाथ मार्केटिंग विभागहरु मा र आसपास वरिपरि दुई दशकहरु देखि काम गर्दैछु र म काम गरेको एकल मार्केटिंग योजना को लागी सोच्न सक्दिन योजना अनुसार.
सबै इमान्दारीतामा, मलाई लाग्छ कि यी धेरै जसो कुरा केवल पोखरा मात्र हो।
यो पूर्ण रूपमा बाँक छैन ... म विश्वास गर्छु कि रणनीतिक सोच महत्त्वपूर्ण छ। सबै भन्दा पछि, तपाईंले ट्रिगर तान्नु अघि लक्ष्यको सामान्य दिशा कहाँ छ भनेर जान्नु आवश्यक छ। जे होस्, म बरु कसैलाई पहिले फायर गर्दछु र लक्ष्य राख्नुको सट्टा महिनौं काम गर्नु भन्दा शट सेट गर्नु जुन बुल्सेलाई बिलकुल हिट गर्न सक्दिन वा गर्न सक्दिन।
म प्राय: व्यावसायहरूलाई ट्रिगर तान्नु भन्दा पहिले असफल भएको देख्छु। तिनीहरू असफलताको डरलाग्दो हुन्छन् कि उनीहरू पक्षाघात भएका छन् र वास्तवमै कहिल्यै अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक जोखिम लिदैनन्। तपाईंको वरिपरि व्यापार हेर्नुहोस् जुन सफल छन्। के तिनीहरू सफल छन् किनकि उनीहरूले निर्दोष योजना गरेका थिए? वा तिनीहरू सफल छन् किनकि तिनीहरू चपल थिए र आफ्नो रणनीतिलाई उनीहरूको सम्भावना, उनीहरूका ग्राहकहरू र उनीहरूको उद्योगको मागको रूपमा समायोजन गर्न सक्षम छन्?
तपाईंको विचार के हो? अनुभव?
टैग: उद्देश्यविश्लेषणआगोमार्केटिङ रणनीतितयार छ
पर्यटक कार्यहरूको मान
सम्पर्क फारमहरू, बट्स, र शर्मरहित स्पाम
अक्टूबर २०, २०१ at २:25० अपराह्न
मलाई लाग्छ तपाई प्राय भागको लागि सहि हुनुहुन्छ। यो मलाई लाग्छ कि यो तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ र तपाइँ कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ कि केहि प्रचार गर्न लायकको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कहिलेकाँही औपचारिक योजनाको लागि स्थान पाउनु आवश्यक हुन्छ जुन दिशा र उद्देश्य हुन्छ। यसले योजना पूरा गरिरहेका मानिसहरूलाई वास्तवमा पाठ्यक्रममा रहन मद्दत गर्दछ। जे होस्, त्यो योजना भित्र योजना भन्दा बढी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ। प्रारम्भिक रणनीतिहरू केही दिनको लागि उल्टो गर्न सकिन्छ। यसको लागि द्रुत परिवर्तनहरू आवश्यक छ।
तपाईंको समानतालाई अलि गहिरो लिनका लागि कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईंले लक्ष्य गर्नु अघि निशाना बनाउनु भएन भने। तपाईं लक्ष्य हिट सक्छ, तर तपाईं सम्भवतः पूरै याद, वा एक मित्र, वा आफैलाई हिट हुनेछ। यसैले म यो सोच्दै छु कि यो धेरै निर्भर हुन्छ तपाईं कल्पना वा व्यापारको बारेमा कती भरोसा गर्नुहुन्छ (लक्ष्य कति ठूलो छ)।
त्यसोभए सबैलाई एकसाथ ल्याउनका लागि - यस प्रतिस्पर्धी वातावरणमा हामी सबै भित्र छौं, हामीले लक्ष्य र आगोको धेरै द्रुत लक्ष्य गर्नुपर्दछ, त्यसपछि पुन: लक्ष्य गर्नु पर्छ र आगो निकाल्नुपर्दछ, त्यसपछि पुन: लक्ष्य राख्नुपर्दछ र फेरि आगो निभाउनु पर्छ। वा ... केवल शटगन ल्याउनुहोस्।
म यो संग तपाईं संग छु। अर्ध-ठूलो स organization्गठनबाट आएको कारण जहाँ गतिहरू महीना र आधा वर्ष मापन गरिएको थियो र "रणनीति + यसलाई प्राप्त गर्दै" दायाँ १ 15 बर्षका संस्थानहरू थिएँ जब म हाम्रो व्यापारको संचालनमा नयाँ पद्धति लागू गर्न थाल्दछु तब म फुर्तिलो हुनुको महत्त्व देख्दछु। । अब एउटा स्टार्टअपको लागि मार्केटिंग चलिरहेको छ, जब मैले शुरू गरेको थिएँ, मार्केटिंग टोली भन्दा सानो जुन तपाईंको लागि काम गर्‍यो तपाईंको पोइन्ट अझ महत्त्वपूर्ण छ। टीमको वरिष्ठ सदस्यहरूको सामूहिक अनुभवहरू तपाईंलाई सही दिशामा दर्साउन पर्याप्त हुनुपर्छ। चुस्त हुनु र निरन्तर राम्रो हुनु भनेको परिचालन उत्कृष्टताको बारेमा हो ... बढ्दो टीमहरूका लागि अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण र प्राय: बेवास्ता गरिएको कौशल सेट।
पूर्ण रूपमा सहमत, ब्रायन! विडम्बना भनेको यो हो कि म मेरो खाली समय अरूको नतिजा पढ्न र अध्ययन गर्नमा खर्च गर्दछु ताकि मलाई कुन दिशाको लक्ष्य 'हुनुपर्दछ' थाहा छ। म केवल चिन्ता गर्दछु कि धेरै कम्पनीहरूले वास्तवमै पहिलो कदम चाल्दैनन्। तिनीहरू तुरून्त एक मिसटेपको कारण विफल हुँदैनन् ... तर तिनीहरू अन्ततः असफल हुन्छन् जब अरूले तिनीहरूलाई पार गर्छन्।
हो म सहमत छु। मैले खराब मार्केटिंग पहिलो हात देखेको छैन तर म पुराना कम्पनीहरूको कथाहरू सुन्न जारी राख्छु वास्तवमै प्रारम्भिक मार्केटिंग प्रयासहरूसँग संघर्ष गर्दै। तिनीहरू भर्खर यसलाई प्राप्त गर्दैनन् त्यसैले विश्वमा सबै योजनाले उनीहरूलाई वास्तविक पाठ सिक्न मद्दत गर्दैन जसले पुन: लक्ष्य गर्न र फेरि गोली हान्नको लागि हो र समस्याको समाधान गर्न तिनीहरू छिटो दोहोर्याउँदैनन्।
खैर, त्यो एक महान सादृश्य हो। यो यस मामला मा धेरै राम्रो काम गर्दछ। तपाईं सहि लक्ष्य कहाँ हो भनेर थाहा पाउनु भयो र म पक्का छु कि तपाईंसँग यसको लागि एकदम गहिरो समझ छ। केही व्यक्तिहरू यद्यपि गर्दैनन्। कसलाई थाहा छ यदि योजनाले सहयोग पुर्‍याउँछ, तर मानिस त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जुन उनीहरूको मार्केटिंगको साथ खुट्टामा गोली हानिरहेका छन्। (मैले भनेको थिएँ, यो एकदम राम्रोसँग फिट भयो)
डग म तपाईंसँग बढी सहमत हुन सकेन। म को हुँ को मूल मा: ENTREPRENEUR। र जहाँसम्म उद्यमीहरू जान्छु म भविष्यको बारेमा हेर्दैछु र त्यहाँ पुग्नको लागि आवश्यक सबै कदमहरू चालेको छु। म रणनीतिहरुमा विश्वास गर्दछु। म योजनामा ​​विश्वास गर्छु। जे होस्, मैले स्वीकार गर्नै पर्छ मैले कहिले पनि परम्परागत "व्यापार योजना" बनाएको छैन।
एक बर्ष पहिले मैले एक भद्र मानिससँग कुराकानी गरें। मलाई उसको नाम पनि याद छैन। बिहानको नास्ताको बैठकमा हामी पहिलो पटक भेटेका थियौं कि हामी दुबै इण्डियाना क्षेत्रको क्यास्टेलटनमा थियौं। यो ती मध्ये एक हो "स्ट्यान्ड-आउट-इन-पार्कि--ल -्ग-धेरै-एक-घण्टा-पछि-मात्र तपाईंले भेट्नु भएको कुराकानीहरू" र केही हदसम्म हामी एउटा व्यवसाय योजना सिर्जना गर्ने विषयमा जान्छौं। मैले उनलाई कबूल गरें कि मैले कहिल्यै परम्परागत व्यापार योजना सिर्जना गरेको छैन। उनले मलाई सोधे, "के तपाई कुनै पनि समय छिट्टै आफ्नो सानो व्यापार को लागी एक बैंक कोष प्राप्त गर्न योजना बनाउनु हुन्छ?" मैले जवाफ दिए, "होईन।" त्यसोभए व्यापार योजनाको बारेमा चिन्ता नगर, उनले भने। संक्षेप मा, उसले मलाई "फायर र एम्स" भने। उनले मलाई मेरो उद्यमशीलता अनुसरण गर्न र बाहिर जाने र सफल हुन प्रोत्साहन दिए।
र त्यसो भए डग त्यो हो जुन मैले विगत years बर्षदेखि गर्दैछु जुन मैले २०० October को अक्टुबरमा क्रस क्रिएटिभको सुरुवात गरेको थिएँ। मेरो कम्पनीलाई जन्मदिनको शुभकामना र हामी दुवैलाई धेरै वर्षौं सफलता जुन हामी उत्तेजित गर्ने जुनसुकै सेवा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीलाई प्रत्येक नयाँ दिन! यो एक उद्यमी हुनको लागि एक महान दिन हो।
पूर्ण रूपमा सहमत, डग। विश्लेषण पक्षाघात ठूला कम्पनीहरूको लक्षण मात्र होइन। धेरै साना व्यवसाय मालिकहरू पनि गलत चालबाट डराउँछन्। सफलता, मूल्यांकन गर्न मेट्रिक्सको साथ कार्य, एक राम्रो रणनीति हो। भाग्य बोल्ड पक्षमा छ।
अक्टूबर २०, २०१ at २:26० अपराह्न
म पनि डग सहमत गर्छु, लचिलोपन आजको खेलको नाम हो। रणनीतिक सोच आज एक सजिलै बदल्दो बजारमा अनुकूल गर्न को लागी सामिल हुनु पर्छ।
यसैले नै वास्तवमै सफल उद्यमीहरूले कारोबार सुरु गर्छन् ... त्यसो भए रणनीतिकारहरूलाई बेच्नुहोस् जसले धेरै कुरा गर्दछन् “पोसकक” कहिल्यै आफ्नै लागि सुरु गरेको हो।